Sonos weputara Roam ohuru ya, ikuku na akwara ndị ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 09/03/2021 22:00 | General, Noticias
Sonos Bugharịa, Sonos ọhụrụ na-ekwu okwu na mba ọzọ
N'ụlọ a ka anyị nyochara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa niile Sonos nke na-abanye n'ahịa ma anyị maara ha nke ọma. N'oge a, anyị nwere ike ịkpọsa nke bụ mgbakwunye ọhụrụ na katọng ngwaahịa Sonos na ihe ijuanya na ha laghachitere ibu na ngwaahịa ikuku.
Sonos Roam bụ ngwaọrụ ikuku ọhụụ ọhụụ sitere na ụlọ ọrụ North America nke na-emetụta echiche nke Move ma kwe nkwa ịtọhapụ anyị na eriri, ihe na Sonos ngwaọrụ na-ebelata. Ka anyị leba anya na ngosi ọhụụ nke Sonos na otu Roam ọhụụ ga - esi banye n'ahịa ụda a na - ebugharị iji merie ndị agha ochie.
Ọdịdị nke Sonos Roam ọhụrụ a kwekọrọ na ngwaọrụ ndị kachasị ọhụrụ nke ika ahụ, na-agbahapụ echiche nke naịlọn dị elu ma na-eme "monocoque" nke na-adọrọ mmasị na karịa ihe niile na-adịgide adịgide. Dị ka ọ dị na mbụ maka ika ahụ, anyị ga - enwe ike ịhụ Sonos Roam ọhụrụ agba abụọ: Nwa na ọcha.
Dị ka Sonos Move, ọ ga-enwe njikọ WiFi iji melite ogo dị mma, ọ bụ ezie na anyị ga-enwe ike ijikọ site na Bluetooth mgbe ngwaọrụ chere na ọ dị mkpa, ha niile na-etinye protocol Apple airplay 2 nke ahụ na-eme ka mmepe nke ime ụlọ Multiroom rụọ ọrụ nke ukwuu. N'ụzọ dị otú a ọ ga-ike site na Gbanwee ụda ya na igwe okwu ndi ozo n’ime sistemu gi, na enye anyi ohere igbanwe egwu na ngwa Sonos kacha nso nwere nani otu igodo.
O si na 179 euro na ebe nrụọrụ weebụ Sonos, ebe ị nwere ike idobe ya ugbu a.
Oge a gburugburu smart, akpaka equalization ntọala nke Sonos na-akpọ Trueplay ọ ga-akwado Bluetooth playback na mgbakwunye na nke mbụ WiFi. N'otu ụzọ ahụ ọ merela na Move, ihe ọhụrụ Sonos Roam a ka IP67 kwadoro megide ájá na mmiri, nakwa dị ka obodo kwụụrụ nke Oge 10 nke playback na-adịghị akwụsị akwụsị (na ụbọchị 10 na StandBy) nke egwu, na-enwe ike ịkwụ ụgwọ site na eriri ikuku ya ma ọ bụ site na eriri USB-C dakọtara. Anyị ga-enwe nyocha ahụ n'oge na-adịghị anya na Actualidad Gadget, ya mere nọrọ na-ekiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Sonos na-enye Roam ọhụrụ ya, ikuku na ndị ọzọ enwere ike ibugharị